अपह`रणमा परेकी गुल्मीकी सम्झनाको श`व फेला ! – Dainiki Online
01/03/2021 01/03/2021 adminLeaveaComment on अपह`रणमा परेकी गुल्मीकी सम्झनाको श`व फेला !
गुल्मीको रेसुगां नगरपालिका ३ भाडगाउँकी सम्झना खत्रीको श`व फेला परेको छ । लामो समयदेखि अ`पह`रणमा परेको भनिएकी उनको खोजि थालिएको थियो । उनको श`व घर नजिकै बारीको कुनामा भेटिएको बताईएको छ । घ`टनाको बारेमा प्रहरीले अ`नुस`न्धान गर्दैछ ।
गत माघ २९ गते जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका ३ भाडगाउँमा २१ वर्षकी सम्झना खत्री बोहोरालाई उनकै घरबाट केही न-चिनेका युवाहरुले बे-पत्ता बनाए । बुहारी ह-राएको खबर उनकी सासु तोमकला खत्रीले छिमिकीलाई जानकारी गराईन । खो-ज खबर गर्दा कतै पनि नभेटिएपछि घ-टना जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा पुग्यो ।
फागनु १ गतेका दिन प्रहरीले सासु र उनका छोरा नेत्रबहादुर खत्रीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलायो र बुहारी कसरी बेप-त्ता भईन सोधपुछ ग¥यो । केही समय हि-रास-तमा राख्यो घरमा सानो बच्चा भएको भन्दै सासुलाई प्रहरीले साझ घर पठायो । छोरालाई हि-रास-तमै राख्यो । अर्कोदिन बिहान घर नजिकै खनियाँको रुखमा ४८ बर्षीया तोमकला खत्री झु-ण्डि-एको अबस्थामा मृ-त फेला परिन । घरबाटै बे-पत्ता भएको छोरीको खो-जत-ला-स गरिदिनु प¥र्याे भन्दै सम्झनाको माईती मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्वर २ अमराईबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उ-जुरी दिए ।
उ-जुरी दुई थरि बन्यो, बे-पत्ता सम्झनाका पती नेत्रबहादुर खत्रीले माईतीजनले आ-त्माह-त्या गर्न आफ्नी आमालाई बा-ध्य पारेको भन्दै प्रहरीमा दु-रुसा-हनको मु-द्धा दर्ता गरे । अझै अचम्मको कुरा त आफ्नो छोरी खो-जीदिनु प¥र्यो भन्दै उ-जुरी बाकेर आएका सम्झनाका बाबु हरिबहादुर बोहरालाई प्रहरीले प-क्राउ गरि हि-रास-तमा राखेको छ ।
परिस्थिती ज-टिल बन्दै गएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समुहका जिल्ला पार्टी अध्यक्ष सोमनाथ सापकोटा नेताहरु बुद्धि जिसी, हिरा ए.सी. , मुसिकोट ३ का वडाध्यक्ष कर्णबहादुर जिसी बिद्यार्थी नेता श्रीराम महत लगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्मा र एस.पी. प्रविण कुमार श्रेष्ठलाई घ-टनाको बारेमा ग-हिरो अध्यायन गर्न सुझाए । छोरीको खो-जी पाउँ भन्दै प्रहरी प्रशासन आएका बाबुलाई नै हि-रास-तमा लिनु यो कस्तो अचम्म । के हो यसको र-हस्य ? नेताहरुले प्रश्न गरे ।
प्रविन बाँस्तोला ह’त्या प्रकरण: घरधनी रमेश गिरी प’क्राउ
आँफु माथी शारीरिक हमला हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई
विवाहमा जानुछ भन्दै गाई फार्मबाट हिँडेकी थिइन् मकैबारीमा श ‘व भेटियो
शपथका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विषयमा सर्वोच्चमा रिट, मंगलबार पेशी
सामूहिक राजीनामाको ‘कार्ड’ : ओलीको विकल्प खोज्ने खनाल-नेपाल समूहको अर्को ‘हतियार’ !